BWA012 - Seranan-tsambo seranana 10 seranana - Rafitra fitantanana porofo | Vahaolana OMG
BWA012 - Toerana fiantsonan-tsambo 10 Seranana - Rafitra fitantanana porofo
Bika Aman 'endrika: Ny vatan'ny milina dia mandray ny teknolojia vita amin'ny vy sy ny sary mainty rehetra, miaraka amin'ny fantsom-baravarana manda
Interface: Ny fakantsary polisin'ny polisy 10pcs dia azo ampidirina amin'ny fotoana mitovy, ny interface tsara tsirairay miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana fampidirana, ny famoahana 1.2A amin'izao fotoana izao.
Operation: Ny rafitry ny Evidence dia tsy misy fitahirizana, ary ny rindrambaiko fitantanana havana dia apetraka amin'ny PC mifandray, ampiasain'ny adaptatera.
Ahitana tariby data mifandraika amin'ny PC, CD fametrahana rindrambaiko, fametrahana fisoratana anarana, rindrambaiko CD iray ihany no ampiasain'ny PC iray.
★ Jamba fitaovana / ★ Fanafarana angona
Ny mpampihatra lalàna dia azo ampiasaina amin'ny fifandraisana iray na amin'ny iray na amin'ny maro amin'ny polisy, ary azo ampiasaina hamatorana na hamono ny lalàna.
Mpanatanteraka mpanatanteraka amin'ny mpampiasa.
Ny fitaovana voafehy dia manana isa tsy manam-paharoa izay mety ekena sy arovana.
Aorian'ny fampifandraisan'ny mpitam-boky mpampihatra lalàna amin'ny toeram-piasana fitantanana fiarovana ny angona, dia hanafatra avy hatrany ny angon-drakitra ny rafitra ary hanafoana ny
Ny angon-drakitra nafarana dia voatahiry ho azy ary atokana ho an'ny anaran'ny mpampiasa mamatotra.
Azo jerena ao amin'ny efijery fampisehoana ireo sata isaky ny efitrano fanafarana.
Ny toeram-piasana fitantanana fiarovana angona dia manaiky ho azy ny toerana misy ny efitrano, ary ny laharan'ny isa eo amin'ny efijery dia mifanentana amin'ny efitrano ara-batana, ary ny fampahalalana fampisehoana dia ahitana: fampahalalana ho an'ny mpampihatra lalàna, ny anaran'ny mpampiasa, ny toeran'ny manafatra, ny fandrosoana fanafarana, sns.
Dingana tsy tapaka: Ny fanohizana ny breakpoint dia tohanana, ary ny fahatapahana tsy nahy ny mpitam-boky mpampihatra lalàna mandritra ny fizotran'ny fanafarana dia tsy misy fiantraikany amin'ny fahamendrehana sy ny mampiavaka ny angon-drakitra nafarana.
Tsy misy angona: Aorian'ny fanangonana angon-drakitra, ny angon-drakitra sy ny angon-drakitra ao anatin'ilay mpitana lalàna dia hoesorina ho azy.
Famaritana fitehirizana mandeha ho azy: Rehefa vita ny fanangonana angon-drakitra dia sokajina ho azy sy arakaraka azy araka ny ora sy daty ary ny laharan'ny fitaovana fampiharana ny lalàna ary ny polisy
Auto-mamaly ny: Nampidirina tao amin'ny gara ny mpitam-panjakàna lalàna ary niantefa azy avy hatrany.
Mandeha ho azy ny kalibration: Tohano ny fikajiana automatique an'ny mpampanoratra lalàna amin'ny alàlan'ny toeram-pandraisana, ary fampifanarahana amin'ny mpizara fotoana.
Fanangonam-bokatra ho azy, fanohanana hampakatra rakitra rakitra, rakitra video tany am-boalohany ary fandefasana streaming rakitra mankany amin'ny mpizara amin'ny alàlan'ny tambajotra.
Tohano ny paikady fanaraha-maso ny fampakaram-bola: ao anatin'izany ny fotoana mampakatra sy ny fifehezana bandwidth.
Asa toerana: Tohano ny seho mba hidirana amin'ny laharan'ny fitaovana mpampihatra lalàna, ny tarika mpampiasa ary ny toerana misy azy ankehitriny, ary ampidiro amin'ny laharana voalohany ka hatramin'ny fifanarahana iray, mba tsy ho diso.
★ Fampitana feo: Afaka manohana ny fanombohana ny fanangonana ny feo sy ny fanangonana feno.
★ fitantanana famafana data: Mamela ny mpampiasa hamafa ny ampahan'ireo rakitra voaangona ao amin'ny fandraisam-peo ihany, ka ho mora amin'ny mpampiasa ny mijery ny horonantsary akaiky indrindra miaraka amin'ny mpitam-boky, na dia
raha nangonina ny horonantsary.
BWA012 - Toerana fiantsonan-tsambo 10 Seranana - Rafitra fitantanana porofo no farany niova: Enga anie 20th, 2020 by Admin
4514 Total Views 3 Views Today